I-Projection inkanyezi amakhaya akhethekile - I-Airbnb
I-Projection inkanyezi amakhaya akhethekile
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-【玖month】
U-【玖month】 Ungumbungazi ovelele
Ngethemba ukuthi unezinkanyezi emehlweni akho nezintaba nolwandle enhliziyweni yakho. Khetha kancane, phila
Thumela i-ray yelanga elifudumele embhedeni wakho ovilaphayo, bukela ifilimu mayelana nokuqala kothando, noma ifilimu yesici ethinta umphefumulo, yeka ukukhathazeka, ubuyele esimweni esizolile, ngisho nomoya uba mnene futhi uzinzile.
Umnikazi wendawo intombazane egxile ekwakhiweni kwangaphakathi futhi ethanda ukuhamba. Unesipiliyoni sokuhlala ekhaya ezweni lonke futhi uzizwa okufanayo nawe. Uyakwazi ukubaluleka kwamagumbi anethezekile nendawo ehlanzekile kubavakashi. Ukuze enze izivakashi zizizwe zikhululekile. futhi bajabule, ukuklanywa igumbi ngalinye liyalingana Ukuhlobisa, kusukela ukukhethwa ifenisha kanye lelihambisana nempahla ezithambile kuya imidwebo zokuhlobisa ngesandla udonseleka kanye imihlobiso ezenziwe ngesandla, umninindlu ubeke okuningi yokucabanga kuwo.
Izingelosi eziningi ezincane ezithanda ubuhle zilethe abathwebuli bezithombe endaweni yokuhlala yomnikazi wendawo ukuze bathathe izithombe. Lokhu futhi ukuqashelwa umnikazi wendawo, futhi ukuqoshwa kuhle ngempela. Wamukelekile abasiki bengqephu abengeziwe abazoza bazozibonela.
Ukugcinwa kwemithwalo, insizakalo yokulethwa kwe-express inganikezwa
[Uhlobo Lwegumbi] Indlu yonke ingeyakho, ikamelo elingu-1 + igumbi lokugezela elizimele, elifanele abantu ababili. Amakamelo avulekile futhi anethezekile, anokukhanya okuhle kanye nezindawo ezikhazimulayo ngaphandle kwefasitela. Umphumela we-insulation womsindo muhle kakhulu, okuvumela ukuthi ulale ngokunethezeka.
[Umphakathi] Itholakala endaweni yokuqala enkabeni yedolobha. Ukusekela amabhulokhi avuthiwe wezohwebo, eduze neSiteshi sase-Shenyang, jabulela ukugcinwa kokuphepha kwempahla kwamahora angu-24, ngithemba ukuthi impilo yakho yokuvakasha ejabulisayo iqala lapha.
[Izesekeli] Irutha ye-wireless yamahhala i-WiFi, okokulala kakotini, okokulala okuthambile nokunethezekile, ushintsho olulodwa kwisivakashi ngasinye, izivakashi ezingahlali ubusuku bonke ngokuqinisekile zizoshintsha zibe izingubo zokulala ezihlanzekile lapho ziphuma, amathawula amhlophe amsulwa namathawula okugeza kuhlanzekile futhi kuhlanzekile, i-shampoo. , eshaweni gel, Izinwele dryer, iketela kagesi, yokugezela Slippers konke ifakwe. Izixubho ezilahlwayo, amakamu alahlwayo, izinsipho ezilahlwayo, izihlalo zangasese ezilahlwayo, iziliphu, izinsingo ezilahlwayo nokunye konke kuyatholakala.
4.95 · 44 okushiwo abanye
Ku-First Ring Road e-Shenyang City, kunezitolo ezivuthiwe zezentengiselwano kanye nezitolo ezingenamkhawulo zosaziwayo be-inthanethi ezizungeze indawo ezungezile. Ngaphansi kwesitezi kukhona i-Wanda Commercial Plaza, i-Taiyuanli Commercial Street, umgwaqo ongaphansi komhlaba onemfashini, ohlanganisa ukudla, ukuzijabulisa, ukuzijabulisa nezemidlalo; Lawson Isitolo, 24h esitolo, imbali esitolo, coffee shop, ubisi itiye esitolo, isilwane elinde wena isipiliyoni. Kukhona futhi idolobha elithengisa ukudla okulula, futhi idolobha lamasiko le-95 likuvumela ukuthi ucwilise olwandle lolwazi.
I-Tathagata Shen ikulungele kakhulu ukwelashwa, Isibhedlela Sokuqala SeYunivesithi Yezokwelapha, kanye ne-202 Northern Theatre General Hospital.
Umnikazi wendawo uhlinzeka ngamahora angama-24 ngezinsizakalo ze-inthanethi nezingaxhunyiwe ku-inthanethi, sicela ukhululeke ukuxhumana naye uma unemibuzo.
U【玖month】 Ungumbungazi ovelele
Ulimi: 中文 (简体)